सडकमा गुडिरहेको ट्रक घरभित्र पसेपछि…. – Gandaki Voice
Home/देश/सडकमा गुडिरहेको ट्रक घरभित्र पसेपछि….
सडकमा गुडिरहेको ट्रक घरभित्र पसेपछि….
शुक्रबार साँझ ब्रेक फेल हुँदा थानकोटबाट कलंकी आउँदै गरेको मालबाहक ट्रक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या तीन पुगेको छ । शनिबार बिहान दुर्घटनाग्रस्त ट्रक निकाल्ने क्रममा किचिएको अवस्थामा थप एकजनाको शव फेला परेको हो । फेला परेको व्यक्तिको पहिचान खुलेको छैन ।
प्रदेश २-०३-००१ ख १४३० नम्बरको ट्रक ब्रेक फेला हुँदा घरभित्र छिरेको थियो । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहका अनुसार ट्रकले किच्दा ओखलढुंगा घर भएका ३० वर्षीय शंकर दमाई (परियार) को घटनास्थलमै र रञ्जित कुमार चौधरीको उपचारको क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको हो ।
ट्रक ठोक्किँदै घरभित्र छिर्दा ट्रक मुनि मान्छे परेका थिए । ट्रकको ठक्करबाट घरको वाल भत्किएको कारण अन्य मान्छे पनि पुरिएको हुनसक्ने बताइएको छ । ट्रक निकाल्ने काम भइरहेको महानगरीय ट्राफिक प्रभाग कलंकीका प्रहरी निरीक्षक पुरुषोत्तम कार्कीले जानकारी दिए ।
ब्रेक फेल भएको ट्रकको ठक्करबाट बा२ज २०४७ नम्बरको ट्याक्सी, बा४च २२१ नम्बरको पिकअप भ्यान (डीआई), बा४ख ३२५२ नम्बरको बस र बा५१प ४९५१ नम्बरको मोटरसाइकलमा क्षति पुगेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश ३-०२००६प १३४१ नम्बरको मोटरसाइकल र बा४७प २४५१ नम्बरको स्कुटरमा पनि क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ । कालिका पेट्रोल पम्पन जिकै ब्रेक फेल हुँदा ट्रकले मोटरसाइकल र कारहरुलाई ठक्कर दिएको थियो ।